'दुःख या सुखका लागि संसार जिम्मेवार छैन'
तलाउमा डुबेर मर्ने मान्छेले मर्नु अघि हात खुट्टा चलाएकै हुन्छ र तैरन जान्नेले पनि रमाएर पौडदै हात खुट्टा चलाएकै हुन्छ । आफ्नो तरिकाले दुबैले हात खुट्टा चलाएकै हुन्छन् ।
मर्नुअघि घुम्नै पर्ने विश्वका १० सुन्दर ठाउँहरु
विश्वका कुन राष्ट्रसँग कति छ सुन, अष्ट्रेलिया कतिऔँ स्थानमा ?
प्राय हिन्दु राष्ट्रहरुमा सुनको प्रयोग ज्यादा गरिन्छ । सुनको प्रयोग विभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रममा समेत गर्ने गरिन्छ ।
मर्नुअघि अवश्य घुम्न जानै पर्ने विश्वका केही चर्चित पर्यटकिय स्थलहरु
एजेन्सी । विश्वमा सयौँ पर्यटकीय स्थलहरु रहेका छन् । तर, केहीमात्र विश्वमा यति धेरै चर्चीत छन् जहाँ घुम्न पर्यटकहर बारम्बार जाने गर्छन् । ती क्षेत्रमा वर्षेनी लाखौँ पर्यटकहरु जाने गरेका छन् ।
विदेश गएर करिअर बनाउने सोचमा हुनुहन्छ ? यी देशहरु जानुहोस्
यो भन्न अब निकै कठिन भइसकेको छ कि ग्रयाजुएसन पश्चात राम्रो जागिरको ग्यारेण्टी हुन्छ । सन् २०२० सम्ममा ४० मिलियन कलेजका शिक्षित कामदारहरु ‘ग्लोबल इकोनोमी’ मा हुने ‘द मिकिन्से ग्लोबल इन्सिटुट’ ले अनुमान गरेको छ ।